Neptona - Wikipedia
I Neptona (marika: ) dia planeta laharana fahefatra ao amin'ny lamin'ny Masoandro sady laharana fahavalo raha ny fanakaikezany ny Masoandro no heverina. Mirefy 4 500 000 000 km ny salan'elanelanelan'i Neptona amin'ny Masoandro ary mirefy 49 400 km ny salan'ny savaivony, izany hoe in-3,81n'ny an'ny Tany.
Raha ampitahaina amin'ny Tany dia in-72n'ny hadirin'i Neptona, im-17,2n'ny lanjan'ny Tany ary ny hakitrony in-0,31 ny an'ny Tany, izany hoe in-1,67n'ny an'ny rano. Avo dia avo ny albedôn'i Neptona: miverina 84%n'ny hazavana voarainy. Maharitra 16 ora sy 3 minitra ny faharetan'ny fihodinany amin'ny tenany. Maharitra 164,8 taona ny tsingerim-pihodinany amin'ny Masoandro. Ny halehibeny raha jerena amin'ny maso dia 7,8 nefa tsy hitan'ny maso tsy misy fijeren-davitra izy. Hita miendrika kapila miloko manopy manga raha mampiasa fijeren-davitra. Ny hafanana eo amin'ny vohon'i Neptona dia -218°C, sahala amin'ny an'i Oranosy. Ahitana hidirôzena sy heliôma indrindraindrindra ny soson-drivotra ao aminy, nefa ahitana etona metanina koa hatramin'ny 3% izay manome ny loko manga mampiavaka io planeta io.
Valo ny satelita fantatra miodinkodina amin'i Neptona, ka ny roa dia azo jerena avy ety ambonin'ny Tany. I Tritona no lehibe indrindra sy ny mazava indrindra, izay hitan'ilay mpahay kintana anglisy William Lassell tamin'ny taona 1848, taona nijerena an'i Neptona voalohany indrindra. I Tritona dia manana savaivo 2 750 km, ka lehibebe noho ny an'ny Volana. I Nereida, izay hita tamin'ny taona 1949, no satelita faharoan'i Neptona, izay manana savaivo eo amin'ny 400 km. Misy satelita enina hafa koa hitan'ny sondy Voyager 2 tamin'ny taona 1989. Mitongilana 50° raha mitaha amin'ny teza fihodinany ny saha manetikan'i Neptona.
Ireo fajirin'ny Masoandro
Merkiora — Venosy — Tany — Marsa — Jiopitera — Satorina — Iorano — Neptona
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Neptona&oldid=1043388"
Dernière modification le 30 Janoary 2022, à 09:50
Voaova farany tamin'ny 30 Janoary 2022 amin'ny 09:50 ity pejy ity.